Aiza ve rangahy ka firy volana izay no nitabatabana fa darodarohanareo foana ny vahoakan’i Soamahatamana nefa ry kely maso mandavadavaka tsy te hahalala. Ny harena lasan-dry zareo fa isika indray ity no lasa ampandovainy fisaraham-bazana eto fotsiny. Tadidiko mihitsy ny teninareo tamin’ireny fa tsy misy tany amidy amin’ny vahiny izany fa ampanofaina no misy. Amin’izao anefa, vao firy volana fotsiny izay dia tsy mena-mivadika mihitsy ry ilay… tsy ho lazaiko ! Matoa anie izahay nananatra tamin’ireny fotoana ireny dia efa tsinjonay fa tsy maintsy ho tonga amin’io famelana mivarotra ny tanàna ho an-dry zareo io ny fanerena hataony e ! Ianareo moa ity tsy mahalala ny tokony hatao lava kanefa tsy azo atoro dia tsy hitako intsony fa dia mbola apetrako aminareo farany ny fanontaniana : Hidororororo foana ve ry Jean a !